" कञ्चनजंगा News " – Page3– " सधैँ अटल "
खुशीको खबर: कोरोनाको आशंकामा टेकु अस्पताल भर्ना गरिएका ४ जनामा कोरोनको संक्रमण देखिएन
कोरोना (कोभिड-१९) भाइरसको आ’शंकामा टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा स’रुवा रो’ग अस्पतालमा भ’र्ना गरिएका चारजना बि’रामीको स्वास्थ्य रि’पोट ने’गेटिभ आएको छ। प’रीक्षणका क्रममा उनीहरुमा कोरोना भाइरसको सं’क्रमण नदेखिएको ज’नस्वास्थ्य प्र’योगशाला स्रोतले जनाएको …
कोरोना (कोभिड-१९) भाइरसको आ’शंकामा टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा स’रुवा रो’ग अस्पतालमा भ’र्ना गरिएका चारजना बि’रामीको स्वास्थ्य रि’पोट ने’गेटिभ आएको छ। प’रीक्षणका क्रममा उनीहरुमा कोरोना भाइरसको सं’क्रमण नदेखिएको ज’नस्वास्थ्य प्र’योगशाला स्रोतले जनाएको छ। अस्पतालले रि’पोर्ट केही बेरपछि सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।
चीनबाट एकजना र कोरियाबाट आएका तीनजना गरी चारजनालाई बि’रामीलाई आइतबार अस्पताल भ’र्ना गरिएको थियो। हालसम्म जम्मा २३ जना बि’रामीलाई कोरोना आ’शंकामा आ’इसोलेसनमा राखिएको छ ।
तीमध्ये १९ जना सकुशल घर फर्किसकेका छन् ।यता सरकारले कोराना प्र’भावित सबै देशका लागि श्रम स्वी’कृति दिने कार्य स्थ’गित गर्ने तयारी गरेको छ । श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको आ’देश अध्ययन गरी मंगलबार नै यसबारे नि’र्णय गर्ने बताएको छ ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतले कोरोना सं’क्रमण रो’कथामका लागि केही दिन वा महिनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उ’डान रो’क्न सरकारलाई आ’देश दिएको थियो । श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले सर्वोच्च अदालतको आ’देशपछि कोरोनाबाट प्र’भावित देशहरुमा जाने कामदार रो’क्न छ’लफल सुरु भएको बताए ।
उनले सर्वोच्चको ’लिखित आ’देश मन्त्रालयमा म’गाइएको जा’नकारी पनि दिए ।वैदेशिक रोजगार विभागले कोरिया जाने कामदारलाई यसअघि नै जा’न रो’केको थियो । ईपीएस कोरिया शाखाले त्यहाँ कोरोना ब्या’पक रुपमा फै’लिएपछि कामदारलाई कोरिया प’ठाउने ता’लिका सा’र्दै आएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहाल सरकारले कतिपय देशमा सी’धा उ’डान नै रो’क्न त’यारी गरिरहेकाले त्यहाँ जाने कामदारलाई के गर्ने भन्नेबारे छ’लफल भइरहेको बताए ।
जुत्ता मात्र होइन ब’म हा’न्ने दिन पनि आउँछ ! प्रचण्डलाई पु’र्वल’डा’कुको ठा’डो चे’ता’वनी, अब के होला ? (भिडियो सहित)
गत आइतबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि राष्ट्रियसभा गृहमा जुत्ता प्र’हा’र भएको थियो । नेकपा नेता भरतमोहन अधिकारीको प्रथम स्मृति सभामा संबोधन गरेर सिटमा फर्किने क्रममा दर्शकदीर्घाबाट उनलाई ताकेर …
गत आइतबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि राष्ट्रियसभा गृहमा जुत्ता प्र’हा’र भएको थियो । नेकपा नेता भरतमोहन अधिकारीको प्रथम स्मृति सभामा संबोधन गरेर सिटमा फर्किने क्रममा दर्शकदीर्घाबाट उनलाई ताकेर जु’त्ता प्र’हार भएको थियो । अध्यक्ष प्रचण्डलाई जुत्ता प्र’हार गर्ने युवक रतन तिरुवालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । जुम्ला घर भएका उनका बाबु मोहन तिरुवाले सशस्त्र द्व’न्द्वमा ज्या’न गु’माएका थिए ।
संमजिक संजालमा यस बिषयलाई लिएर धेरै टिकाटिप्पणी आइनै रहेका छन् । यु’द्धमा बुबा गुमाएको आ’क्रोशमा उनले जुत्ता प्र’हार गरेको हुनसक्ने अभिव्यक्ति पनि आइरहेका छन् ।
प्रहरीमा तिरुवाले दिएको बयान अनुसार भाषणका क्रममा वर्ग संघर्षको कुरा चित्त नबुझेपछि आ’वेशमा घ’टना भएको भन्ने पनि कुरा आइरहेको छ । तर के कति कारणले उनले प्रचण्डमाथि जुत्ता प्र’हार गरेको हो भन्ने अझै खुलेको छैन ।
प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै पशुपतिनाथमा बिशेष पूजा
काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै पशुपतिनाथ मन्दिरमा मंगलबार बिहान विशेष पूजा गरिएको छ । दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न लागिएका ओलीको स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै विशेष पूजा गरिएको …
काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै पशुपतिनाथ मन्दिरमा मंगलबार बिहान विशेष पूजा गरिएको छ ।
दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न लागिएका ओलीको स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै विशेष पूजा गरिएको हो ।
विशेष पूजाका लागि ओलीका आफन्त बिहानै पशुपतिनाथ मन्दिर पुगेका थिए ।
सोमबार ओलीका परिवारीक सदस्यले पशुपतिनाथ मन्दिरमा पूजा गर्ने इच्छा गरेबमोजिम आज विहानै करिव १० मिनेट बिशेष पूजाआजा गरिएको बताइएको छ ।
पशुपतिका मूलभट्ट गणेश भट्टलगायतले ओलीको सुस्वास्थ्य तथा मिर्गौला प्रत्यारोपण सफल होस् भन्ने कामनासहित पूजा गरे पनि पशुपती क्षेत्र विकास कोषले भने यसबारे जानकारी नभएको जनाएको छ ।
‘यसबारे हामिलाई केही जानकारी छैन, पारिवारिक रुपमा उहाँहरुले आएर पूजाआजा गरेको हुनसक्छ ।’ कोषका सदस्य सचिव प्रदीप ढकालले भने ।
प्रधानमन्त्री ओली मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि सोमबार त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएका छन् । उनको बुधबार मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने तयारी गरिएको छ ।
कोरोनाको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै होलीमा विशेष ध्यान दिन चिकित्सकको सुझाव
काठमाडौं– कोरोना भाइरस संक्रमणको सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै चिकित्सकले होली पर्वमा स्वस्थ्यप्रति विशेष ध्यान दिन सुझाव दिएका छन् । कोरोनाको भाइरसको सङ्क्रमणबाट जोगिन सबैभन्दा पहिले व्यक्ति आफैँ सचेत हुनुपर्ने चिकित्सकले सुझाव …
काठमाडौं– कोरोना भाइरस संक्रमणको सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै चिकित्सकले होली पर्वमा स्वस्थ्यप्रति विशेष ध्यान दिन सुझाव दिएका छन् ।
कोरोनाको भाइरसको सङ्क्रमणबाट जोगिन सबैभन्दा पहिले व्यक्ति आफैँ सचेत हुनुपर्ने चिकित्सकले सुझाव दिएका हुन् ।
होलीमा भीडभाड हुने, पानीमा भिज्दा रुघा खोकीको सम्भावना बढ्ने हुँदा होलमा विशेष ध्यान दिन चिकित्सकले सुझाएका हुन् ।
होली पर्वमा एक अर्कालाई अबिर र रङ्ग लगाउँदा वा पानी खेल्दा मानिस मानिसबीचको दूरी नजिक हुने हुँदा रुघोखोकी सर्ने सम्भावना धेरै टेकु अस्पतालका प्रवक्ता एवं सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप बाँस्तोला बताए ।
अहिले कोरोनाको उच्च जोखिम रहेकाले सकेसम्म समूहमा नहिँड्न र समूहमा नबस्न पनि डाक्टरको आग्रह छ ।
सङ्क्रमण फैलिनुअगावै सतकर्ता अपनाउन सके कोरोनाको संक्रमणलाई रोक्न सक्ने भन्दै डाक्टरले होलीमा धेरै पानी नखेल्न पनि सुझाव दिएका छन् ।यस वर्षको होली फागुन २६ गते परेको छ । तराइका जिल्लामा भने होलीको रौनक शुरु भइसकेको छ ।
कतारमा कोरोना भाइरस त्रास बढेपछि, कतारका नेपाली भन्छन् ‘स्वदेश फर्किने मन छ’
पोखरा – चीनको उहानबाट सुरु भएको नोभेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विश्वका ३४ मुलुकमा फैलिइसकेको छ । कतारमा समेत कोरोना भाइरसको सं’क्र’मण देखिएको छ । कतारका नेपाली भने कोरोनाकै त्रासले नेपाल फर्कन …
पोखरा – चीनको उहानबाट सुरु भएको नोभेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विश्वका ३४ मुलुकमा फैलिइसकेको छ । कतारमा समेत कोरोना भाइरसको सं’क्र’मण देखिएको छ । कतारका नेपाली भने कोरोनाकै त्रासले नेपाल फर्कन चाहान्छन् ।
पोखराका सूर्य खवास कतारको सनइयामा रहेका खवास प्रोफेसनल सर्भिस सेक्युरिटि कम्पनीमा कार्यरत हुनुहुन्छ । खवास कम्पनीले छुट्टी दिए नेपाल फर्किने बताउनुहुन्छ । ‘कम्पनीले कहिले पठाउँछ थाहा छैन, हामीसँगैको साथीलाई पनि सं’क्र’म’ण भई अस्पतालमा राखेको छ ।’ –उहाँले भन्नुभयो ।
केहि समय अघिसम्म कम्पनीले बिरामीलाई सोही ठाउँमा राख्ने भने पनि पछि अस्पतालमा राखेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । कतारमा नेपालीको ज्या’न नगए पनि सं’क्र’ममित भने भएको उहाँले बताउनुभयो । नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।
शुक्रबार मात्र विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लूएचओले कोरोना भाइरसको प्रकोप बढ्दै गएको जनाएको थियो । कतारमा करिब ५ लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा रहेका छन् । अहिले विश्वभर कोरोनाबाट ८० हजार २ सय ३९ सं’क्र’मित भएका छन् । विश्वभर निधन हुनेको संख्या २६ सय ६६ पुगिसकेको छ । चीनमा ७७ हजार ७ सय ८० कोरोनाको सं’क्र’म’णमा परेका छन् ।
नेपालमा रेल चलाउन २२६ कामदार आवश्यक, २६ जना भारतबाट ल्याइने,भारतमा बनाउँदै गरेको रेल नेपाल ल्याउन १ महिना लाग्ने
काठमाडौं – कुर्था–जनकपुर–जयनगर ३४ किलोमिटरमा चलाउन नेपालले अर्डर गरेका दुई ‘ट्रेन सेट’ (रेल) भारतको चेन्नईस्थित रेल उत्पादन केन्द्र (सवारी डिब्बा कारखाना)मा तयार भइरहेका छन् । यी रेल निर्माणको काम करिब करिब …
काठमाडौं – कुर्था–जनकपुर–जयनगर ३४ किलोमिटरमा चलाउन नेपालले अर्डर गरेका दुई ‘ट्रेन सेट’ (रेल) भारतको चेन्नईस्थित रेल उत्पादन केन्द्र (सवारी डिब्बा कारखाना)मा तयार भइरहेका छन् ।
यी रेल निर्माणको काम करिब करिब सकिएको तर, तत्काल ल्याउने सम्भावना कम रहेको रेल विभागले जनाएको छ ।
विभागले यसअघि पटक–पटक रेल नेपाल आइपुग्ने मिति तय गरेपनि विभिन्न समस्याका कारण निर्धारित मितिमा रेल ल्याउन सकिएको छ ।
र चेन्नईको कोकन रेलवे कर्पोरेशनले दुई सेट ट्रेन कारखानामा तयार भइसकेको जानकारी दिएको विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले बताए ।
‘दक्ष कामदारको टुंगो छैन । भर्खरै त कामदार नियुक्तिका लागि सुचना प्रकाशन गरिएको छ’ मिश्रले भने, ‘अब पनि सेड्युल परिवर्तन भएन भने एक महिनाभित्रमा भारतमा बनेका रेल नेपाल आइपुग्छन् ।’
विभागले ४२ करोड ५० लाखको दरका दुईवटा रेल ८५ करोड रुपैयाँमा भारतको सरकारी कम्पनी कोकन रेल्वे कर्पोरेसनसँग रेल किन्ने सम्झौता गरेको थियो ।
त्यसो त भारतमा उत्पादन भइरहेको रेल जनकपुर–विजलपुरा हुँदै कुर्थासम्म सञ्चालन ल्याउने तयारी विभागको छ । मिश्रका अनुसार रेल नेपालमा आइपुग्न अझै महिनादिन लाग्नेछ भने सञ्चालनको मिति तय गरिएको छैन ।
‘रेल तयारी अवस्थामा छन् हामीलाई पत्राचार आइपसकेको छ’ उनले भने, ‘ल्याएर कहाँ राख्ने ? सञ्चालन गर्न कामदार छैनन् धेरै समस्या छन् ।’
सरकारले पहिलो चरणमा भारतको जयनगरदेखि नेपालको बर्दिवाससम्मको ६९ किलोमिटर दूरीमा रेल सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर तत्कालका लागि जयनगरदेखि कुर्थासम्म ३४ किलोमिटरमा मात्र रेल सञ्चालन हुने भएको छ ।
६९ किलोमिटर रेलमार्गमा हालसम्म इनरुवादेखि विजलपुरासम्म ५२ किलोमिटर क्षेत्रमा मात्र जग्गा प्राप्त भएको र १७ मिलोमिटर क्षेत्रमा अझै जग्गा प्राप्त गर्न नसकिएको विभागले जनाएको छ ।
यस्ता छन् खरिद गरिएका रेल
मिश्रकाअनुसार खरिद गरिएका दुवै रेल एकैपटक नेपाल आइपुग्ने छन् । मध्यम दूरीका लागि उपयुक्त मानिने यी रेल प्रतिघण्टा सय किलोमिटरभन्दा बढी दूरी तय गर्न सक्नेछन् । रेलमा डिजेल इन्जिनबाट बिजुली उत्पन्न हुनेछ र ट्र्याक्सन मोटर चल्नेछ ।
त्यसैगरी अगाडी र पछाडी दुवैतिरबाट गुडाउन मिल्ने रेलभित्र एसीसहित एउटा कोच पनि हुनेछ । जसमा ५० देखि ६० जना विशिष्ट व्यक्तिहरुले यात्रा गर्न सक्नेछन् ।
नेपालको झण्डा फरफराउँदै गुड्ने रेलमा उभिएर र बसेर १ हजार ३ सय जना यात्रुले यात्रा गर्न सक्नेछन् ।
‘जयनगर–विजलपुराका लागि एउटा डिमो ट्रेन सेटमा ५ वटा डिब्बा हुन्छन् । त्यसमा उभिएर र बसेर १ हजार २ सयदेखि १ हजार ४ सयसम्म यात्रु आवतजावत गर्न मिल्नेछ’ विभागका प्रवक्ता अमन चित्रकारले खबरहबसँग भने, ‘त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न दुई सयभन्दा बढी जनशक्ति आवश्यक पर्छ ।’
रेल चलाउन सरकारले माग्यो २६ कामदार
रेल सेवा सञ्चालनका लागि दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनको कार्य शुरु भइरहेको विभागले जनाएको छ । रेल सञ्चालनमा ल्याइने चर्चा भएसँगै कामदार पनि भारतबाट करारमा ल्याउने कुरा भइरहेको छ ।
रेल सेवा सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारबाट २६ जना विदेशी कामदार तथा अन्य २ सय जना नेपाली कामदार गरी २ सय २६ जना कामदार नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया शुरु भइसकेको महानिर्देशक मिश्रले खबरहबलाई जानकारी दिए ।
त्यस्तै सरकारले रेल सञ्चालनका लागि करारमा कामदार ल्याउने भनेसँगै नवलपरासीका रेल चालक बमबहादुर घिमिरेलाई भौतिक पूर्वातार तथा यातायात मन्त्री बसन्तकुमार नेम्बाङले केही समयअघि भेट गरेका थिए ।
नेपालको पहिलो रेल चालकका रुपमा रहेका घिमिरेलाई मन्त्रालयमै बोलाएर छलफल गरिएको थियो । अहिलेपनि घिमिरेसँग कुराकानी भइरहेको बताउँदै मिश्रले भने, ‘घिमिरे नेपालका लागि पहिलो रेल चालक मानिएको छ । त्यसकारण हामी छलफलमै छौं । निष्कर्ष निक्लिएको छैन ।’
धनुषाको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्मको रेल चल्ने भएपछि सरकारले नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडका लागि कर्मचारी भर्ना शुरु गरेको छ ।
कम्पनीले आठ जना स्टेशन मास्टर, एक–एक जना दरले चिफ पावर कन्ट्रोलर र चिफ लोको इन्स्पेक्टर गरी ४२ वटा पदमा कामदार नियुक्ति गर्न लागेको छ ।
सरकारले रेल सेवा सञ्चालन गर्नका लागि सरकारी स्वामित्वको नेपाल रेल्वे कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ ।
के छ रेल्वे सम्बन्धि विधेयकमा
रेल्वे सम्बन्धलाई व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार रेल चालक र सहचालक माध्यमिक तह (दश जोड दुई) वा सो सरह उतीर्ण गरेको हुनुपर्दछ ।
त्यसैगरी रेल्वे ऐन २०७६ अनुसार चालकको हकमा रेल गुडाउनका लागि कम्तीमा ५ वर्ष सहचालकको रुपमा काम गरेको हुनुपर्नेछ ।
तर नेपालमा रेल सञ्चालन यो नै पहिलो पटक हो । जसकारण यससम्बन्धी ज्ञान भएका कामदारको अभावका कारण दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनमा सरकारलाई चुनौती थपिएको छ ।
सोनुको त्यो स्माइल, जसलाई अर्बाैको कम्पनीले आफ्नो प्रोफाइल बनायो (हेर्नुहोस भाइरल भिडियो सहित )
आजकाल अधिकाशं मानिस सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दछन् । एकैसाथ करौडौ मानिसको पहुचमा रहने भएकाले पनि सामाजिक सञ्जालमा कुनै नौलो र केहि फरक भेटिएपछि त्यो एकाएक भाइरल हुने गर्दछ । यस्तैमा भारतका …
आजकाल अधिकाशं मानिस सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दछन् ।
एकैसाथ करौडौ मानिसको पहुचमा रहने भएकाले पनि सामाजिक सञ्जालमा कुनै नौलो र केहि फरक भेटिएपछि त्यो एकाएक भाइरल हुने गर्दछ ।
यस्तैमा भारतका एक डेलिवरी ब्वाईको भिडियो भाइरल भएको छ । जहाँ उनको हासो अर्थात स्माइलले नै उनलाई चर्चित बनाएको हो ।
भाइरल भिडियोमा देखा परेका डेलिवरी ब्वाइ हुन् सोनु । उनी जोमेटो नामक फूड डेलिवरी कम्पनीमा कार्यरत छन् ।
खासमा उनी एक ग्राहकको अर्डर दिन गएका थिए । जहाँ ती ग्राहकले आफ्नो कमाई तथा कामका बारेमा बडो सुन्दर तवरले हासेर जवाफ दिएका छन् ।
उनको यहि हासो नै उनलाई चर्चित बनाउने साधन बनिदियो । सोनुको स्माइलकै कारण फ्यान भएका ग्राहकले अब जोमेटोसंग सोनुलाई नै अर्डर पठाउन अनुरोध गर्न थालेका छन् ।
उनको चर्चा चुलिएसंगै जोमेटो इण्डियाले शुक्रवार आफ्नो ट्विटर हैण्डल सहित अन्य सबै सामाजिक सञ्जालको प्रोफाइल राखेको छ ।
कोरोना भा’इर’सका का’र’ण विदेशबाट नेपाल आउने बिमानलाइ रो’क लगाउन सर्वोच्च अदालतको आदे’श !
काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले कोरोना प्रभावित मुलुकबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुने सीधा हवाई उडानमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले सोमबार यस्तो आदेश दिएको हो। …
मैले मामा ओलीलाई मात्र हैन, देशको भविष्य भोलीलाई मिर्गौला दिँदैछु : समिक्षा संग्रौला (भिडीयो हेर्नुहोस् )
काठमाडौं । केही दिन पहिलेदेखि सामाजिक सञ्जालमा ओलीलाई हैन भोलीलाई, म दिन्छु देशको भविष्य बनाउँन मिर्गौला भन्ने स्लोगन खुबै पोष्ट भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपालको भोलीको अर्थात भविष्यको …
प्रधानमन्त्रीलाई मिर्गौला दिन समीक्षा पुगिन् टिचिङ अस्पतालमा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मिर्गौला दान दिन भाञ्जी समीक्षा संग्रौला ज्ञवाली टिचिङ अस्पताल पुगेकी छन् । डोनरलाई पनि स्वास्थ्य निगरानीमा राख्नु पर्ने भएकाले संग्रौला पनि अस्पताल पुगेकी हुन् । …
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मिर्गौला दान दिन भाञ्जी समीक्षा संग्रौला ज्ञवाली टिचिङ अस्पताल पुगेकी छन् । डोनरलाई पनि स्वास्थ्य निगरानीमा राख्नु पर्ने भएकाले संग्रौला पनि अस्पताल पुगेकी हुन् ।
दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नका लागि प्रधानमन्त्री ओली टिचिङ अस्पतालमा भर्ना भएका छन् । उनको बुधवार प्रा डा प्रेमराज ज्ञवाली नेतृत्वको टोलीले बुधवार मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्दैछ ।
केही दिन पहिलेदेखि सामाजिक सञ्जालमा ओलीलाई हैन भोलीलाई, म दिन्छु देशको भविष्य बनाउँन मिर्गौला भन्ने स्लोगन खुबै पोष्ट भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपालको भोलीको अर्थात भविष्यको उज्यालो नक्षत्र भएको भन्दै उनका लागि जो कोही मिर्गौला दिन तयार हुने आशयका पोष्टहरु सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका थिए । यही बीचमा उहाँको नामा भान्जि पर्ने समिक्षा संग्रौला ज्ञवालीले मिर्गौला दिने पक्का भएपछि अहिले सामाजिक संजालमा समिक्षाको साहसको खुलेरै तारिफ भएको छ । उनिपनि यो स्लोगनबाट प्रभावित भएकी छन् ।